Ityala lalowo utyholwa ngokudlwengula nokuphatha gadalala abantwana lisakuviwa kungekudala – Elitsha
11th October 2016 Unathi TutaEdition 10 0 Xhosa
Indoda eneminyaka engamashumi amane anesithoba (49) ubudala yaseKuyasa ijamelene nezityholo ezilishumi elinesine ekuquka kuzo, ukudlwengula nokuphatha gadalala ngokwesondo abantwana abaselula abangamakhwenkwe nabangamantombazana ekula ngingqi. Aba bantwana baphakathi kobudala obuyiminyaka esixhenxe ukuya kwishumi elinesine nekurhaneleka ukuba iziganeko ezi zaqala kunyaka ophelileyo ukwenzeka.
Umrhanelwa ufake isicelo sakhe sebheyile kwinkundla kamantyi yaseKhayelitsha nalapho avakalise ukuba akafuni ukuphendula malunga nezityholo azibekwayo logama esafaka isicelo sebheyile. Lo utyholwa ngokuba wayebabizela endlini aba bantwana ze abenze ezi zenzo ukanti kukwavakala nokuba wayebabukelisa imifanekiso yamanyala.
Kwezinye izityholo azibekwayo ummangalelwa udize ukuba nangona ebezivumile kumphandi wetyala kodwa akafuni kuthetha ngazo kwesi sicelo sebheyile. Logama ezinye azikhanyeleyo esithi aziyonyani.
Abamangali batyhola ngelithi le ndoda yayibaphatha-phatha ngenjongo zesincwaso xa beyokuthenga iilekese kwisikroxo sayo, ukanti abanye bathi wayebabizela endlini abenze la manyala. Nangona kunjalo ummangalelwa yena uthi wayebaphatha kuba ebadlalisa njengabantwana.
U Mantyi kweli tyala umnumzana Xolani Patrick Menyiwe udize ukuba akafuni esi sicelo sebheyile sitsale ixesha elide, kuba wazibona ingxelo zamajelo eendaba kwityala likaSinoxolo Mafevuka nalapho kwakubhalwa khona ixesha esasenzeke ngaso isiganeko.
Ityala lizakubuyela enkundleni kwinyanga kaOktobha.
Also read: Abahlali basemaholweni kwaLanga balwela izindlu